Kpọtụrụ - Bocas Bali
Bocas Bali dị na Frangipani Island, agwaetiti nke onwe na oke osimiri Caribbean n'ime agwaetiti Bocas Del Toro. Anyị na-eji ụgbọ mmiri ga-ewe nkeji 10 ruo 15 site na Obodo Bocas.
Inweta Ebe a
Obere ọdụ ụgbọ elu Bocas Del Toro bụ njem nkeji iri ma ọ bụ njem taxi nkeji abụọ site na mpaghara ime obodo. Bocas Bali na-eburukarị ndị ọbịa na Divers Paradise Boutique Hotel na ogbe ndịda Bocas Town. Agbanyeghị, anyị nwere ike iburu gị n'ọdụ ụgbọ mmiri dị iche ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Site n'ebe ahụ, ọ bụ iji ụgbọ mmiri ga-ewe nkeji 10 ruo 10 ruo ebe ntụrụndụ anyị dị jụụ.
Bocas Del Toro Site na Panama City, Panama (A tụrụ aro)
Ọ bụrụ na ị na-agba ụgbọ elu n'isi ụtụtụ, ị nwere ike ịga Bocas Del Toro n'otu ụbọchị site na US Ọ bụrụ na ị na-esi Europe na-eme njem, ị nwere ike ịnọrọ otu abalị na Panama City n'etiti ụgbọ elu. Ụgbọ elu mpaghara na-aga Bocas Del Toro adịghị na saịtị ntinye akwụkwọ n'ịntanetị. Ị ga-achọ akwụkwọ ụgbọ elu a www.AirPanama.com.
Nzọụkwụ 1 - Ụgbọ elu 1 - Obodo gị na ọdụ ụgbọ elu Tocumen Intl (PTY) na Panama City
Ụgbọ elu gị na-abanye n'ọdụ ụgbọ elu Tocumen Intl (PTY) dị na Panama City ekwesịghị ịbịarute n'elekere 2:35 nke ehihie iji gaa Bocas Del Toro n'otu ụbọchị. Nke a na-enye ohere maka otu awa site na oge ị rutere iji mechaa kọstọm, na-anakọta akpa, na nweta tagzi. Ọ bụ ụgbọ ala nkeji iri anọ na ọdụ ụgbọ elu Albrook Regional (PAC), ị ga-enwe ihe dịka otu awa tupu ụgbọ elu nkeji iri ise ga-aga Bocas Town. Nke a na-eche na ị debala ụgbọ elu 40:50 ehihie na Air Panama gaa Bocas Town.
Nzọụkwụ 2 – 30 nkeji tagzi ga-esi n'ọdụ ụgbọ elu Tocumen Intl (PTY)
Ka ị na-apụ na mpaghara akpa, tagzi ga-adị. Naanị gwa ha na ị ga-achọ ịga ọdụ ụgbọ elu Albrook. Ọ na-abụkarị mbanye nkeji 30 dabere na okporo ụzọ. Ndị ọkwọ ụgbọ ala tagzi na-enwekarị enyi ma ha ga-ana $30-$40 dollar. Gbaa mbọ hụ na ị kwenye na ego tupu ịbanye tagzi. Ị ga-achọ ego na dollar US; ha anaghị ewere kaadị kredit. (Agụnyere ụgbọ njem ala niile na ngwugwu anyị)
Nzọụkwụ 3 - Flight 2 - ụgbọ elu nkeji 50 site na Albrook (PAC) gaa ọdụ ụgbọ elu Bocas Del Toro (BOC)
A ghaghị ịdebanye ụgbọ elu nke nkeji 50 site na ọdụ ụgbọ elu Albrook Domestic (PAC) gaa Bocas Del Toro Airport (BOC) ozugbo site na Air Panama. (www.AirPanama.com.) Ọ bụrụ na ị na-eji saịtị ntinye akwụkwọ n'ịntanetị wee họrọ BOC ka ebe ị na-aga, ọ gaghị egosi ụgbọ elu adịghị.
Air Panama na-agba ụgbọ elu anọ kwa ụbọchị, ụbọchị asaa n'izu site na Albrook ruo Bocas Del Toro. Oge ụgbọ elu anọ a bụ 6:30 nke ụtụtụ, elekere 9:00 nke ụtụtụ, elekere 2:00 nke abalị, na elekere 5:15 nke ehihie, ụgbọ elu nkezi $220 kwa tiketi njem njem. Air Panama na-arịọ gị ka ị bịarute awa abụọ tupu ịpụ, mana anyị na-ahụ na otu awa tupu ọpụpụ ezuola.
Nzọụkwụ 4 - (Nhọrọ) Hotel nọrọ na Panama City
Ị nwere ike ịde akwụkwọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ na Panama City ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ime ya na Bocas Del Toro n'otu ụbọchị. Anyị na-akwado ka ị nọrọ otu abalị ma ọ bụ abụọ na Panama City ma ọ bụrụ na oge kwere. Casco Viejo bụ ebe kacha amasị anyị; ọ dị naanị ihe dịka nkeji iri site na Albrook yana nkeji iri atọ site na Tocumen site na tagzi. Casco Viejo bụ akụkụ dị egwu, akụkọ ihe mere eme nke Panama City nwere ụlọ mmanya dị elu, ịzụ ahịa, na ụlọ nri. Ọ dị ọnụ karịa obodo mana ọ dabara na ahụmịhe ahụ.
Na mgbakwunye na Casco Viejo, ọtụtụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ ndị dị elu na Panama City na-efu ihe dị nta nke ọnụahịa ị ga-atụ anya ịkwụ na nnukwu obodo. Ọ bụghị ihe ọhụrụ ịhụ ọnụ ahịa ọnụ ahịa ihe na-erughị $100 kwa abalị maka otu ụlọ oriri na ọṅụṅụ mara mma nke dị n'etiti obodo ahụ.
Bocas Del Toro Site na San Jose, Costa Rica
Ọ na-ewekarị ụbọchị abụọ mgbe ị na-esi US ma ọ bụ Europe na-aga site Juan Santamaría International Airport (SJO) na San Jose Costa Rica na Bocas Del Toro Airport (BOC). Ụgbọ elu mpaghara abụọ na-enye ụgbọ elu nkeji 50 n'etiti San Jose na Bocas Del Toro. Otu bụ Skyway www.skywaycr.com na nke abụọ bụ Aerobell www.aerobell.com.